Nhau - TDS Drill Inowana Iko Kukwanisa Kugadzira Iyo Yese Kuchera Tambo Ye Rotary Kuchera
TDS Drill Inowana Iko Kukwanisa Kugadzira Iyo Yese Kuchera Tambo Ye Rotary Kuchera
Tricone bit inoshandiswa zvakanyanya kutenderera, inonyanya kushandiswa kuchera maburi makuru uye maburi ekugadzira mumakomba makuru, migodhi yakavhurika, kucherwa peturu, uye mimwe minda. Kune mapoka maviri makuru anotenderera anochera: (1) kutenderera kwekupwanya neakakwira-poindi kurodha padombo kubva kumatoni matatu, uye (2) kutenderera kutenderera neshear simba kubva kudhonza matomu.
Mukupwanya kwe rotary, mabhii anoshandiswa zvakanyanya matatu-ekoni yekuboora mabheti akafukidzwa nemazino mazhinji kana mabhatani anotenderera akasununguka kunge giya remapuraneti uye kupwanya dombo sezvo chibooreso chinotenderera. Iko kunodzikira kunosvitswa kuburikidza nehuremu hwechibhorani rig pachacho, uye kutenderera kunoiswa panoperera pombi yekuboora. Kutenderera kunopihwa nemagetsi kana mota yemagetsi, uye kumhanya kwekutenderera kazhinji kunosiyana kubva pa50 kusvika pa120 rpm. Yakadzvanywa mweya inowanzo shandiswa kuburitsa akacheka kubva pasi pegomba. Kukura kwemukana pakati pepombi yekuboora uye madziro egomba zvine chekuita nekukweva kwekucheka matinji. Pamwe yakanyanya kutetepa kana yakanyanyisa yakaenzana gwanza kunodzora kwekuchera kumhanya.
Kuchera kwe Rotary kwakakodzera pamasero echibhorani kubva pa203 kusvika pa445 mm pakureba. Parizvino, kuchera kwe rotary ndiyo yave iri nzira yakakosha mumigodhi mikuru yakavhurika. Imwe yekukanganisa kwenzvimbo dzekutenderera dzekutenderera ndedzekuti hadzina kukodzera kuchera chibhorani chakakombama, icho chakanakira kuputika kwedombo.
Nyundo yetricone percussion inowedzera kuwedzera kugadzirwa, kunyanya mune yakaoma dombo mamiriro. Isu tinodada kutaura kuti BD DRILL inokwanisa kupa tambo dzese dzinotenderera, kubva kuShock absorb, Drill pipe, Stabilizer, Percussion nyundo, Deck bush, Tricone bit.
Post nguva: Chivabvu-20-2021
Rori Yakakwira Mvura Tsime Kuchera Rig, 6 Dth Nyundo, Dhiziri Mhepo Compressor, Mvura Well Drilling Rig Machine, Hydraulic Mvura Tsime Kuchera Rig, Dth Nyundo Bit Mutengo,